Shoppingzụ ahịa dị ọnụ ala na Moscow | Njem zuru oke
Enwere ụzọ iji chekwaa ego site n'ụkpụrụ Moscow, ọ bụrụ na ị tụlee nhọrọ ndị a:
Auchan: Obi abụọ adịghị ya, ebe dị mma maka ịzụ ahịa. Ọ bụ nnukwu ụlọ ahịa nwere nnukwu ọnụahịa. Examplesfọdụ ihe atụ: Baguette bụ 9,50 rubles (30 cents), macaroni noodles (packet) na 08:50 rubles (22 cents).
IKEA: ebe a nkịta na-ekpo ọkụ na-eri 20 rubles (60 cents), ice cream 10 rubles, ihe ọ softụ softụ dị nro n'efu.
Casa Kofe: nri ụtụtụ maka 99 rubles (dollar atọ) ma ọ bụ blini na ihe ọ drinkụ drinkụ na mpịakọta, nri ehihie azụmahịa n'etiti 2.29 ruo 2.99 rubles (09.07 dollars).
Nkọwa: nri ụtụtụ maka 180 rubles (05.06 dollar) (kọfị, ihe ọ juiceụ juiceụ, blini ma ọ bụ tost na ham na cheese na ihe ndị ọzọ ịhọrọ).
MuMu: Ọ bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ aụ ndị Russia na-eri nri dị ụtọ na US $ 2 na nri ehihie maka dollar 3.
Enwere ụlọ ahịa ịzụ ahịa dị ọnụ dịka Evropeisky (ọdụ Kievskaya), Atrio (ọdụ Kursk), Ryad Okhotny ịzụ ahịa (ọdụ Ochotny Rjad)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Shoppingzụ ahịa dị ọnụ ala na Moscow
ebe ịzụta ọnụ ala kọmputa onunu na moscow
Zaghachi ka sifredo
Ọdịbendị ndị Maya na Belize